Qaboojiyaha birta duuban
DC01 Gariiradda xaashida birta duuban ee duuban DIN EN 10130 10209 DIN 1623
QALABKA QABAY DOOB XAASHA IYO QABIILKA - (DC01 BS EN 10130: 2006)
Bir qabow la duubay, (badanaa loo yaqaan Qabow la dhimay ama CR), waa badeecad kaarboon yar, oo la soo saaray iyadoo la isticmaalayo ceeriin wax sida kookaha iyo dhuxusha at bir dhagaxshiidka dunida oo dhan.
DC01 birta (1.0330 wax) waa heer-heer-Yurub ah oo duuban oo duuban oo leh kaarboon hoose bir alaab guri oo u samaysan qabow … Intaa waxaa dheer, tan bir waxaa sidoo kale loo adeegsadaa xaaladaha korontada ku shaqeeya. Magacaabista bir waa DC01+ZE (ama 1.0330+ZE), halbeegguna waa EN 10152
Ra'iisul CRC Qalabka qoyska qabow oo duudduuban xaashida gariiradda birta SAE1008 SPCC
Qalabka guryaha ee qabow la duubay xaashida gariiradda birta SAE1008 SPCC
1 Dhumucdiis: 0.15-3.0mm
2 Ballac: 750-1010/1220/1250mm
3 Length sida codsiga macmiilka.
4 Fasalka Birta: SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 iwm.
Tayo ganacsi oo jilicsan, Tayo adag oo buuxda ama Tayo Sawir qoto dheer.
Xirxirida: xirxirida dhoofinta caadiga ah.
Adeegsiga ganacsiga DC01, DC02, DC04 Xaashida Birta ah ee Qaboojiyaha ah ee Tayada Wanaagsan
DC01, DC02, SAE1006 Sheet Steel Rolled Steel oo leh Ganacsi Jilicsan, Tayo Adag oo Buuxda
gariiradda birta duuban ee duuban DC01 DC03 DC04 DC06
DC03 - Darajadani waxay ku habboon tahay samaynta shuruudaha sida sawirka Deep iyo profiles adag oo ku habboon. DC04 - Tayadaani waxay ku habboon tahay shuruudaha sare u qallooca. … DC06 - Tani tayada sawir -qoto -dheer ee qoto -dheer ayaa ku habboon shuruudaha ugu qallooca ugu sarreeya.
Maqaarku wuxuu maray EN10130 Fasalka DC01 SPCC gariiradda birta duuban
Gariiradda qabow-duuban ayaa si weyn loo adeegsadaa, sida wax soo saarka baabuurta, alaabta korontada, kaydka duullimaadka, duulista, qalabka saxda ah, gasacadaha cuntada, durbaannada birta ee la daabacay, dhismaha, qalabka dhismaha, baaskiilada iyo warshadaha kale. Isla mar ahaantaana, sidoo kale waa xulashada ugu wanaagsan ee soo -saaridda taarikada birta ee dahaarka leh.
Xeerka Daaweynta Kulaylka HRBS HV10
Annealed + Dhameystirka S - -
1/8 adag 8 50 ~ 71 95 ~ 130
1/4 adag 4 65 ~ 80 115 ~ 150
1/2 adag 2 74 ~ 89 135 ~ 185
Aad u adag 1 ≥85 ≥170
xaashida birta duuban iyo gariiradda, CR CRC
Shuruudaha Bixinta & Gaadiidka:
Tirada Dalabka Ugu Yar: 20tons
Qiimaha: Marka loo eego tayada iyo tirada
Faahfaahinta Baakadaha: Xidhmada dhoofinta caadiga ah
Waqtiga Bixinta: 30 maalmood gudahood (badiyaa kama badna 20 maalmood)
Shuruudaha Bixinta: T/T ama L/C (Waxaan marka hore ka qaadnaa 30% deebaajiga.)
Awoodda Bixinta: 18000 tan bishii
Gawaarida Gaarka ah ee Qotada Dheer ee Qaboojiyaha Birta ah ee La Duubay SPCD / SPCE / DC03
SPCD / SPCE / DC03 caadadii ayaa la gooyay Sawirkii Qotada Dheeraad ahaa ee La Duubay Gariiradda / Gariiradda
Xaashida birta qabow ee duubnayd ee gariiradda
Tayada Sawirka qoto dheer
1 Dhumucdiis: 0.3-2.0mm
2 Ballac: 700-1250mm
3 Dhexroorka gudaha: 508mm
4 Fasalka Birta: SPCD, SPCE, DC03
Xirxirida: xirxirida dhoofinta caadiga ah
6 Goynta iyo kala -goynta ayaa loo codsan karaa sida macmiilka.
Sawir qoto dheer / Dhaqan buuxa / Jilicsan SPCC ganacsi, SPCD, SPCE Coils Rolled Steel Coils / Coil
Xirmooyinka qabow ee duuban ee SPCC, SPCCT, SPCD, SPCE, SPCF, SPCG
Waraaqaha birta qabow ee duubnaa & darajooyinka gariiradda SPCC waa darajada birta Jabaan, laga bilaabo JIS G3141. Magaca caadiga ah: isticmaalka guud & guud ee xaashida birta kaarboon-qabow-duubtay iyo falliiqa. Isla qeybta darajooyinka caadiga ah waa SPCD, SPCE, SPCF, SPCG
Darajada Birta: SPCC 、 SPCD 、 SPCE ， Q195 ， Q235 ， DC03 、 DC04 、 DC05 ， HC260LA 、 HC380LA 、 HC420LA ， HC260P 、 HC300P ， HC260Y
Cabbirka: Dhumucdiis: 0.5 ~ 2.0mm; ballac: 800-1430mm
Gobolka Bixinta: Qabow la duubay
Heerka Birta: JIS G3141, EN10130, EN10268, GB/T5213
Adeegga Been -Abuurka: Xaashida Birta Furka; Gariiradda Steel Kala